စိုစွတ်နေတဲ့ဆံပင်နဲ့ မအိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်(၇)ချက် - Bright News
စိုစွတ်နေတဲ့ဆံပင်နဲ့ မအိပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက်(၇)ချက်
June 13, 2020 Software Kaber OMG 0
စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ အိပ်ယာဝင်တဲ့ အလေ့အထဟာ ဆိုးကျိုးတွေများစွာရှိပါတယ်။အကယ်၍သင်ဟာ ညအိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ ရေချိုးတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါက သင်ရဲ့ ဆံပင်ခြောက်သွေ့စေဖို့အတွက် ခေါင်းအုံးနဲ့ သင့်ခေါင်းမထိခင်အချိန်လေးမှာ အချို့သော ဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ ပုံစံထက်ကိုပိုမိုပြီး အလေးထားသင့်ပါတယ်။ ယခုဆောင်းပါးမှာတော့ စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ အိပ်ယာဝင်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုစုစည်းတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ထိုသို့အိပ်ယာဝင်ခြင်းဟာ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ ဦးရေပြားယားယံတာကျိန်းစပ်တာတွေကိုခံစားရစေပါတယ်။ ထိုသို့ခံစားရပြီဆိုပါက ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုအပြစ်တင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုခံစားရတဲ့ အကျိုးဆက်ဟာ အမှန်တကယ်တော့ စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ အိပ်ယာဝင်တဲ့ အလေ့အထရှိလို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးရေပြားယာယံတာတွေအပြင် စိုထိုင်းနေတဲ့ ခေါင်းအုံးကြောင့်လည်း ဗောက်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးစိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်ကြောင့် ခေါင်းအုံးမှာလည်း စိုထိုင်းလာတာကြောင့် ဘတ်တီးရီယားတွေပို၍တိုးလာစေပါတယ်။
စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်ဟာပို၍ပျက်ဆီးလွယ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဆံပင်ကိုသေချာခြောက်သွေ့အောင်မလုပ်ဘဲအိပ်ယာဝင်မယ်ဆိုပါက ဆံပင်ရှုပ်ထွေးတာတွေကိုဖြစ်လာစေပါတယ်။ မနက်ရောက်တဲ့အခါမှာ သင့်ရဲ့ ဆံပင်တွေဟာလည်းညစ်ညမ်းစေကာ ရှုပ်တေထွးနေတဲ့ ဆံပင်ကြောင့် သင့်ရဲ့ မနက်တာဟာလည်း စိတ်ဖိဆီးမှုတွေနဲ့ စတင်လာရနိုင်ပါတယ်။
စိုစွတ်နေတဲ့ ဦးရေပြားနဲ့ အိပ်စက်လိုက်တာကြောင့် မနက်နိုးထလာတဲ့ အခါမှာ ခေါင်းကိုက်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပိုများလာနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ပြောကြားချက်များအရ စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တွေကျဆင်းသွားကာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြန်၍ပူနွေးလာတာနဲ့အမျှခေါင်းကိုက်တာကိုခံစားလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခြားကျွမ်းကျင်သူများက ဆံပင်ကိုပုဝါနဲ့ ပတ်အိပ်ခြင်းဟာလည်း နာကျင်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေကာ အိပ်တဲ့ အခါမှာလည်းအနှောက်အယှက်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စိုစွတ်သောဆံပင်နဲ့ အိပ်ယာဝင်ခြင်းဟာ ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပေမယ့်လည်း သင့်ရဲ့ ဆံကေသာအပေါ်များတော့ ဆိုးကျိုးတွေများစွာရှိလာနိုင်ပါတယ်။ စိုစွတ်နေတဲ့ဆံပင်ဟာခေါင်းအုံးနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ဆံပင်ကိုတင်းကြပ်လာစေမှာပါ။ အိပ်ယာမဝင်ခင်မှာ သင့်ရဲ့ ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ဖို့ အချိန်ပိုပေးလိုက်ခြင်းက ဆံကေသာ မပျက်ဆီးစေတာအပြင် ဆံ​ပင်ကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်းလျော့ချလာနိုင်မှာပါ။
ပါးလွှာသောဆံပင်တွေဟာ နူးညံပြီးတော့ ကျစ်လစ်ဖြောင့်စင်းနေတတ်ပါတယ်။ စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်နဲ့အိပ်စက်တာကြောင့်သင့်ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံတွေပျက်စီးလာကာ ဆံပင်အုံပွလာတတ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်နဲ့ ပုံမှန်အိပ်ယာဝင်နေမယ်ဆိုပါက ဆံကေသာ ကျစ်လစ်တာတွေလျော့ကျလာနိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်ကိုသွားပါကာ ဆံပင်ညှပ်ဆရာမှသင့်ဆံပင်အဖျားတွေညှပ်ဖိုးလိုတယ်လို့ မကြာခဏပြောနေပါသလား? စိုစွတ်တဲ့ ဆံပင်နဲ့ အိပ်ယာဝင်နေတာကာ သင့်ရဲ့ ဆံပင်အဖျားတွေမကြာခဏညှပ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုစွတ်နေတဲ့ ဆံပင်ဟာပျက်ဆီးလွယ်တာမို့ သင့်အိပ်နေတဲ့အခါမှာ ခေါင်းကိုလှည့်နေရတာကြောင့် ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းကိုကြုံလာရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
စိုစွတ်နေတဲ့ဆံပင်နဲ့အိပ်စက်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ဦးရေပြားတင်မကဘဲ အရေပြားကိုလည်းယားယံလာစေပါတယ်။ အိပ်စက်နေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့ ဦးခေါင်းဟာ ဘယ် ညာလှည့်နေတာကြောင့် သင့်ရဲ့ ဆံပင်ဟာမျက်နှာပေါ်ကိုရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ စိုစွတ်ဆံပင်နဲ့ အခန်းတွင်းအပူချိန်တွေက သင့်မျက်နှာတဲ့ လည်ပင်းရှိအရေးပြားတွေကို ယားယံစေနိုင်တဲ့ ဘတ်တီးရီးယားတွေ ကြီးထွားစေဖို့ အခြေအနေကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို သင့်အနေနဲ့ သိရှိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့် ညအိပ်ယာမဝင်ခင် ဆံကေသာကို ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပြီး အိပ်ယာဝင်ခါနီး ခေါင်းလျှော်တာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ အကြုံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Reff; And Credit Photo Brightside.
အာဖရိကတွင်သာ တွေ့ရတတ်သော ဝမ်းနည်းနေတဲ့ပုံစံနဲ့ ဖားမျိုးစိတ် ဓာတ်ပုံ ( 10 ) ပုံ
အလွန်အကျွံ မစားသောက်သင့်သော ကျန်းမားရေးကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ အစားအစာ၄မျိုး